How To Download ( ဒေါင်းလော့ဆွဲ နည်း ) | | X-DADDY Free Porn Video
Download ဆွဲမည် ဒါရိုက် အွန်လိုင်းမှကြည့်မယ်ဆိုပါက…အရင်ဆုံး Browser က ဆိုဒ်ထဲသွားပါ…ဖေ့ဘုတ်ကနေ မသွားပါနဲ့…ဖေ့ဘုတ်က ဟိုပိတ်ဒီပိတ်နဲ့ မလို့..ပါ…ကြည့်မရတာနဲ့ မပေါ်တာနဲ့ နဲ့ အမျိုးမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်…
Browser သုံးမယ်ဆိုရင် Fire Fox , Chrome ,UC browser ကြိုက်တာတခုခု နဲ့သုံးပါ…တချို့ Browser တွေက Java Script ပိတ်ထားရင် Video တွေ ဒေါင်းလော့ ပေ့စ်တွေဆီမရောက်ဘဲ ဖြစ်တတ်လို့ပါ…AD Block တွေ သုံးထားရင်လဲ… လင့်တွေက ဆက်သွားလို့မရပါဘူး…
Download ဆွဲဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ပို့စ်ကို နှိပ်ပါ….
အောက်ဘက်ကိုဆွဲချပြီးဆင်းပါ…ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့သူတွေအတွက်…တန်းမမြင်ရလို့ …ပြီးရင်…Downlaod Button ၃ ခု ပေးထားတာကို
ပထမဆုံး လင့်စ်က Openload မှာတင်ထားတာပါ…Openload နဲ့ဒေါင်းသူတွေအတွက်ပါ…
Openload ကဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုရင် Upload and Download ၂ ခုလုံး Unlimited ပါ…
စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလို့ရပါတယ်..တိုက်ရိုက်လဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်…လစ်မစ် မဖြစ်ပါဘူး…၁ခု ဆိုးတာ က ကြော်ငြာ ၂ ခါတက်တာ ၁ ခုပါဘဲ….
ဒုတိယ လင့်စ်ကတော့ တော်တော်များများသိပြီးသား.ဖြစ်တဲ့ Pcloud နဲ့တင်ထားပေးတာပါ…Pcloud acc ရှိတဲ့သူတွေက မိမိ အကောင့်ထဲကို
တိုက်ရိုက် Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားလို့ရနိုင်သလို ကိုယ့်အကောင့်ကနေလဲ ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ်…အကောင့်မရှိရင်တော့…Traffic limited မဖြစ်ခင်ဒေါင်းယူလို့ရသလို တိုက်ရိုက်လဲကြည့်လို့ရပါတယ်.. ၁ခု ဆိုးတာက …Pcloud က Month Limited ပြည့်သွားတာနဲ့အကောင့်မရှိတဲ့သူတွေ
ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့မရတော့ပါဘူး….အကောင့်နဲ့ ဖွင့်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို Save လုပ်ပြီးသိမ်းပြီးမှ ဒေါင်းလို့ရတော့မှာပါ….
တတိယ လင့်ကတော့…ကျနော့်ဆိုဒ်ရဲ့ဒေါင်းလော့လင့်စ်ပါ…ဒီကောင်ကတော့အလွယ်ဆုံးပါဘဲ…Direct Dowload လို့ရေးထားပါတယ်…
သူကတော့ လင့်စ်ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့… Xdaddy Download Page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်….အဲ့ကိုရောက်တာနဲ့ Download Full HD Movie
ဆိုတဲ့ Button ၁ ခုဘဲရှိပါတယ်…အစိမ်းနုရောင်လေးနဲ့ အဲ့ ဘက်တန်ကို ၁ ချက်ဘဲနှိပ်လိုက်ပါ…. ၁ ခါထဲတန်းဒေါင်းလော့ဆွဲချသွားပါလိမ့်မယ်..
၂ ခါ ၃ ခါ မနှိပ်ပါနဲ့ လိုင်းမကောင်းချိန်မှာ နှိပ်မိတက်တယ်မှားပြီးတော့… ၃ခါနှိပ် ၃ ခု ၁ပြိုင်ထဲဒေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်…
1 click download လုပ်ထားတာပါ… Direct Download ကDaily Limit ရှိပါတယ်…၁နေ့ကို 100G ဘဲပေးထားပါတယ်…ကျနော်ဒီလကုန်ပြီးမှ ထပ်ပြီးတော့ Traffic ပြန်ထပ်ချဲ့ရမှာပါ…. ဒီလအတွက် ၀ယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့…ဒီလတော့ 100 G Limited နဲ့ ခဏ မှေးပြီးဒေါင်းကြပါ….ည၂နာ၇ီဆိုရင် ဆာဗာ က Reset လုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြီးတော့ နောက်၂၄ နာရီမှာ ၁၀၀ ဂစ် ပြန်ဒေါင်းလို့ရပါပြီ….
Pcloud Download နဲ့ Direct Downlaod ဆိုတဲ့ ၂ ခုက လစ်မစ်နဲ့ပါ….Openload ပထမဆုံးရေးထားတဲ့ Full Movie Download ဆိုတဲ့ ဟာကတော့ No Limit ပါ…အချိန်တိုင်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ်….
ကဲဒေါင်းလော့တင်တဲ့နေရာ တွေ ကျနော် ရှင်းပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒေါင်းပုံဒေါင်းနည်းကို ထပ်ပြောပြပေးပါ့မယ်….
Downlaod တွေ ဆွဲလို့ Button တွေကို နှိပ်ရင်5second စောင့်ရပါတယ်….SKIP AD ကိုနှိပ်ပြီးမှ ဒေါင်းလော့ လင့်တွေဆီရောက်တာပါ…
ဒီအဆင့်မှာတင် တော်တော်များများ ဆက်မသွားတက်တော့ဘဲ ဒေါင်းမရဘူးဒေါင်းမရဘူး အော်နေကြတာပါ….
Download Full Movie ( Openload Link ) ကိုစပြောပြပါမယ်…
အရင်ဆုံး Download Full Movie ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ…… Skip AD ကို ရောက်ပါမယ်…၅ စက္ကန့်စောင့်ပြီးရင် SKIP AD ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ်……ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတခုရှိပါတယ်…Skip ad ကိုနှိပ်ရင် ၁ခါ ၁လေ Popup တက်လာတက်ပါတယ်… ကြော်ငြာက ….အဲ့လိုတက်လာရင်
Browser မှာNew Tab တစ်ခု ပွင့်လာပါတယ်…အဲ့ကျရင် အဲ့ကျရင်ပိတ်ပြီးတော့ ဒေါင်းလော့လင့်ကိုပြန်နှိပ်ပြီးပြန်ဝင် Skip AD ကိုပြန်နှိပ်ပါ…
တခါတလေမှ တက်တာပါ…ကိုယ်သွားချင်တဲ့ Openload ဆိုဒ်ဆီမရောက်ရင် လင့်ကို ပြန်ဝင်လိုက်ပါ…
အခု Openload ဆီကိုရောက်သွားပါပြီ….ဒေါင်းရမဲ့နေရာပါ….အဲ့မှာ..အနီရောင်လေးဒေါင့်နဲ့ မြှားထိုးပြီးပြထားပါတယ်…
Download ဆိုတာကို….အဲ့ ဘက်တန်ကိုနှိပ်ရမှာပါ…
အဲ့ကောင်ကိုစနှိပ်တာနဲ့ ကြော်ငြာ ၁ခုတက်ပါပြီ…သူတို့ဆိုဒ်က ထည့်ထားတဲ့ကြော်ငြာပါ…New Tab မဟုတ်ရင် New Windows ၁ခုအနေနဲ့ ဘရောင်ဇာမှာ တက်လာမှာပါ…အော်တို…အဲ့ကျရင် အဲ့တက်လာတဲ့ ဟာကို ပိတ်ချလိုက်ပါ… လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Tab ကိုပိတ်စရာမလိုပါဘူး….
Download အသေးလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်….Free Download ဆိုပြီးတော့ Button အကြီးကြီးနဲ့ အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ…..
ပထမ ၁ချက်နှိပ်လို့ မဒေါင်းသေးရင် နောက်၁ ချက်ထပ်နှိပ်ပါ…. အဲ့လိုနှိပ်ရင်းနဲ့ ကြော်ငြာ၁ ခုတက်လာပါတယ်….ပိတ်ပေးလိုက်ပါ….
ပြီးရင် ကိုယ့်ဖုန်းကွန်ပြူတာ ၁ခုခု ကိုကြည့်လိုက်ပါ…ဒေါင်းလော့ ဆွဲနေတဲ့ Noti ကိုတွေ့ ရပြီဆို ဒေါင်းလို့ပြီးပါပြီ….Openload ကဒေါင်းရင် Download File Size ပိုသေးပါတယ်… Pcloud and Direct ထက်ကို သူ့မှာ အော်တို Converse လုပ်ထားပြီးသားမလို့ပါ…Video ကို …သူများ အကောင့်တော့မသိဘူး…ကျနော့်အကောင့်ကတော့ Openload မှာ ဖိုင်ဆိုဒ် ကို ပြန်ပြီးလျော့ထားပါတယ်…500 MB ကိုဒေါင်းရင် Openload မှာ 350 MB လောက်ဘဲ ပြန်ဒေါင်းရတယ်…ကျနော်တမင်လျော့ချပေးထားတာ… File Size အကြီးလိုချင်ရင်တော့ Pcloud မှာဒေါင်း
ဒါ Openload နဲ့ဒေါင်းတဲ့နည်းပါဘဲ…..ဒီနည်းက မလုပ်တတ်လို့သာခက်နေတာပါ… ၁ခါဒေါင်းဖူးရင် နောက်ကို ထမင်းစားရေသောက်သလိုဘဲ..အရမ်းလွယ်ပါတယ်…..ဒီမှာရေးပြထားတာက အသေးစိတ်မလို့ အရှည်ကြီးဖြစ်နေတာပါ…စာတွေက…တကယ်ဒေါင်းရင် ၁၀ စက္ကန့် မကြာပါဘူး..ဒေါင်းတာက….
Pcloud Download ဆွဲနည်းထပ်ပြပေးပါ့မယ်….
အခုနည်းကတော့ လစ်မစ် မဖြစ်သေးတဲ့နည်းပါ…ဒေါင်းရလွယ်ပါတယ်လစ်မစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ အကောင့်ရှိမှဒေါင်းလို့ရတော့မှာပါ….တကယ်လို့လစ်မစ်ဖြစ်နေလို့ဒေါင်းမရရင် Openload နဲ့သွားပြန်ဒေါင်းပါ….Direct Download နဲ့ပြန်ဒေါင်းပါ… အဆင်ပြေပါတယ်…
အရင်ဆုံး Pcloud Download ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ…ဆိုဒ်ကပေးထားတဲ့ Pcloud Download လို့ရေးထားတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ….
Skip AD ဆီကိ ရောက်ပါလိမ့်မယ်….ပေါ်က ပုံနဲ့ပြထားသလို5second စောင့်ပြီးရင် SKIP AD ဆိုတဲ့ အ၀ါရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ…
Pcloud ဆီကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်…..Skip AD ကတခါတလေ နှိပ်ရင် ကြော်ငြာတက်တက်လာတက်ပါတယ်…သတိထားပါ..ကိုယ်သွားတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘဲနဲ့ ကြော်ငြာတဲ့ ဆိုဒ်ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်…အဲ့လိုရောက်သွားရင်ရောက်နေတဲ့ TAb ကိုပိတ်လိုက်ပါ….
Skip Ad ကိုပြန်နှိပ် ပြီးထပ်သွားပါ…အဆင်ပြေပါတယ်….
ပုံမှာကြည့်ပါ…Pcloud ကို ရောက်သွားတဲ့နေရာပါ…အဲ့မှာ Download ဆိုတာရှိပါတယ်….မြှားထိုးပြထားတယ်…..အဲ့ဒါကိုနှိပ်တာနဲ့
Download File and Save to Pcloud ဆိုပြီးတော့ လာပေါ်ပါတယ်….
Pcloud acc ရှိတဲ့သူက အခုတင်ထားတဲ့ ဟာကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲဆေ့ပြီးသိမ်းထားလို့ရပါတယ်….အချိန်မရွေးပြန်ဒေါင်းနိုင်သလို
Acc မရှိတဲ့သူကတော့ Download File ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ စပြီးတော့ ဒေါင်းလော့ ဆွဲချနေတဲ့ Noti ကိုတွေ့ ရမှာပါ…. ဆက်တိုက်တော့မနှိပ်ပါနဲ့
၂ ခါ၃ ခါ တွေပြိုင်တူဒေါင်းနေတက်ပါတယ်…Pcloud နဲ့ဒေါင်းနည်းပြီးပါပြီ….လစ်မစ် ပြည့်သွားခဲ့ရင်တော့…အခုလိုနည်းနဲ့ဒေါင်းမရတော့ဘဲ…မိမိ အကောင့် အရင်ဖွင့်ထားမှ…မိမိ အကောင့်ထဲကို Save အရင်လုပ် ပြီးမှ… ကိုယ်ဆေ့ထားတဲ့ နေရာကိုသွားပြီးတော့ ဒေါင်းလော့ ဆွဲချရမှာပါ….
ရှုပ်သွားမှာဆိုးလို့ ထပ်မရေးပြတော့တာပါ….. အကယ်လို့ လစ်မစ်ပြည့်သွားရင် Direct Download နဲ့ မဟုတ် Openload နဲ့သွားပြန်ဒေါင်းပါ….
Pcloud က ၁ လကို လစ်မစ် ၄၀၀၀ ဂစ် 4T ၀ယ်ထားပေးပါတယ်…၁၁ နေ့နောက်ပိုင်းဆို လစ်မစ် မဖြစ်ပါဘူး…
Direct Download ကတော့ လွယ်ပါတယ်..ပေးထားတဲ့ Direct Download ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ….
Skip Ad ကိုဆက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ….အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့နည်းတွေနဲ့တူတူပါဘဲ…အ၇မ်းလွယ်လို့ခက်နေတာပါ….
Skip လုပ်ပြီးရင်…Xdaddy Download Page ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်….
ပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့ ဒေါင်းလော့ ခလုတ် ၁ ခုဘဲရှိပါတယ်….. အဲ့ဒါကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စပြီး ဒေါင်းလော့ဆွဲချပါလိမ့်မယ်…
၁ ချက်ဘဲနှိပ်ဒေါင်းပါ….1 click download လုပ်ထားလို့… Direct Download link ကိုကျနော် Unlimited ၀ယ်ပြီးသုံးထားပါတယ်… စိတ်ကြိုက်
ဒေါင်းနိုင်သလောက်ဒေါင်းလို့ရပါတယ်…. လစ်မစ်မရှိပါဘူး…Pcloud ၁ ခုဘဲလစ်မစ်ရှိတာပါ….Direct Download ကိုနှိပ်မယ်ဆို ၁ ချက်ဘဲနှိပ်ပါ…
လိုင်းမကောင်းလို့ ၂ ချက် ၃ ချက်တွေ မနှိပ်ပါနဲ့ ၂ ခု ၃ ခု တွေ ပြိုင်တူဒေါင်းနေပါလိမ့်မယ်…. ဘေပိုကုန်မှာဆိုးလို့သတိပေးတာပါ..
ကဲ အားလုံးဘဲ ဒေါင်းမရဘူးဒေါင်းမရဘူးအော်နေတဲ့သူတွေ ကျနော်သေချာအစဆုံးခရေစေ့တွင်းချ ရေးပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီ…
ဒါမှ ဒေါင်းမရဘူးဆိုရင်လဲ…. မရှင်းပြတက်တော့တာအမှန်ပါဘဲ…နေ့စဉ်ဒေါင်းနေသူတွေ အများကြီးပါ…
မှတ်ချက် ဆိုဒ်ထဲမှာ အရင်ပို့စ်အဟောင်တွေရှိပါတယ်…အဲ့ကောင်တွေကတော့ လင့်တွေ ၁ချို့ တကယ်ပျက်ကုန်ပါပြီ…
ပျက်တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ ကွန်းမန့်ရေးပေးပါ..ဒါမှ ကျနော်ပြန်ရှာရလွယ်ပြီး မြန်မြန် ပြန်ပြင်ပေးလို့ရမှာပါ…ပို့စ်အဟောင်းတွေ ဒေါင်းမရခဲ့သော်
ကဲအားလုံးဘဲ ပျော်ပျော်ကြီး ဒေါင်းနိုင်ပါစေဗျာ….
Healing Camp: One World 2017 HD Korea 18+ Movie( အောဇာတ်လမ်း )
Cohabitation H Of Three Japan 18+ Movie Full HD Movie
Attackers daughter 2016 HD Japan Movie 18+ Movie
Raping step mother Maki Miyashita 2017 HD Japan 18+ Movie
XDADDY.INFO – TeenFidelity – Sally Squirt Detention Hall4Full HD Porn Video
XDADDY.INFO – TeenFidelity – Lily Jordan TFSN Cheerleaders
The Sisters’ Room 18+ Korea HD အောဇာတ်လမ်း
Yong Ju Gol (2015) Korea UNCUT 18+ အောဇာတ်လမ်း
XDADDY.INFO – TeamSkeet – Mandy Muse Hydraulic Booty Bounce TeenCurves
XDADDY.INFO – StepSiblingsCaught – My Step Sister Got Arrested Alexa Grace
Affair party3ดูหนังอาร์เกาหลี-Korean 18+ Movie HD
XDADDY.INFO – Dani Daniels GetsaCreampie Video & Dani Daniels – Mofos B Sides